I-Oukitel K12, ene-10.000 mAh ibhetri, iya kufika kwintengiso ngoJuni | I-Androidsis
Inkampani yaseAsia iOukitel ibhengeze ukuba isebenza kwisiphelo esitsha sabo basinika ukuzimela kwezilwanyana. Sithetha nge-K12, i-terminal enebhetri eyi-10.000 mAh. Kodwa ukuzimela ayisiyiyo kuphela indawo eyomeleleyo yesiphelo, Isiphelo esiza kuthi sifike kwintengiso ngoJuni.
I-Oukitel K12 ikwavelele isikrini sayo esingu-6,3-intshi ngesisombululo esigcweleyo seHD +, ukumelana namanzi kunye namandla okusindisa umbulelo kumqhubekekisi weHelio P35 ovela kwiMediaTek, ehamba ne6GB ye-RAM kunye ne-64GB yokugcina ngaphakathi. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi Ukucaciswa kwe-Oukitel K12Ndiyakumema ukuba uqhubeke ufunda.
Ngokomvelisi, ibhetri enkulu ye-10.000 mAh ibiza ngeyure ezi-2 kuphela, enkosi ngenkqubo yayo yokutshaja ngokukhawuleza. Ndiyabulela koku kuzimela, ngokulula sinokuba njalo phantse iveki ngaphandle kokulayisha i-terminal, Oko kuyenza imodeli yokuthatha ingqalelo xa siphuma rhoqo ngeempelaveki okanye kuhambo kwaye asifuni kwazi ngokuqhubeka nokutshaja i-smartphone yethu.
Ngokwendlela yoyilo, i-Oukitel K12 isinika i bonisa ngethontsi lemvula elidumileyo ngaphezulu, Isikrini esinesisombululo se-1080 × 2340. Umzimba wayo wenziwe ngealuminium alloy ngokudibeneyo kunye nokuthungwa kwesikhumba okunika imvakalelo emnandi kakhulu ekuchukumiseni.
Emuva, sifumana Ikhamera ephambili eyi-16 mpx yenziwe nguSony kunye neyesibini ye-2 mpx. Ikhamera eyenzelwe iiselfie ifikelela kwi-8 mpx. Ngasemva, sifumana inzwa yeminwe.
I-Oukitel K12 icwangciselwe ukubakho kwintengiso ekuqaleni kukaJuni, ixhasa ii-4G, 3G kunye ne-2 G bands, ngoko sinokuyisebenzisa nakweliphi na ilizwe emhlabeni. Ukuba unomdla kule ndawo, i-Androidsis iya kukwazisa ngokukhawuleza kwiiveki ezizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » IsiTshayina Android » I-Oukitel K12, ene-10.000 mAh ibhetri, iya kufika kwintengiso ngoJuni
Umculo ku-YouTube uya kusivumela ukuba sidlale umculo ogcinwe kwisixhobo sethu